Mutoro Wemitemo | Law & More BV
Mutemo wemitoro » Zvikumbiro zvekukuvadza
Nheyo huru inoshanda mumutemo weDutch muripo: munhu wese anotakura kukuvadzwa kwake. Pane dzimwe nguva, hapana munhu ane mhosva. Funga, semuenzaniso, nezvekukuvara nekuda kwechimvuramabwe. Kukuvara kwako kwakakonzerwa nemunhu here? Pakadaro, zvinogona kungobhadhara kukuvara kana paine chikonzero chekuti munhu abate chikwereti.
URI KUTI UTSVIRE NECHEMA KWEMADHAMU
> Chibvumirano chibvumirano
> Chikwereti chepamutemo
> Mhando dzekukuvara
> Kutsiva kuzere kwekukuvara kwakatambura chaizvo
> Inishuwarenzi inopesana nekukuvara
> Chiitiko chekirasi
> mabasa edu
Pane kupfupika here uye zvinokanganisika here? Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvinokuvadza zvichikonzera hazvisati zvichizodaidzwa zvakananga kubva kune imwe pati. Kazhinji, chiziviso chekushomeka chinofanira kutanga kutumirwa kuitira kuti chipe mumwe mubati mukana wekuzadzisa zvaanofanira kuita mukati menguva yakatarwa. Kana imwe bato ichiri kutadza kuzadzisa zvainosungirwa kuita, izvi zvinokonzeresa kutadza kuripwa uye kuripirwa kunogona kunzi zvakare.
Law & More ndinogonawo kukuitira izvi
Hapana mumwe anochengeta nguva dzadzo? Tinogona kutumira zviyeuchidzo zvakanyorwa uye kutama pachinzvimbo chako
Kugadzira chibvumirano kunosanganisira basa rakawanda. Naizvozvo nyora rubatsiro rwe
Ungada rutsigiro mukugadzira chibvumirano chebasa here? Fona mukati Law & More
Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mutemo wemhosva unoshanda
Kana zvinodiwa zvechibvumirano kana zvechivanhu zvasangana, mubhadharo unogona kupihwa. Iko kukuvara kwakakodzera kubhadharwa muNetherlands kunobva kwaisanganisira kurasikirwa kwemari uye kumwe kurasikirwa. Iko kurasikirwa kwemari kune chekuita nekurasikirwa kana kurasikirwa kwemubhadharo uchitambura, kumwe kurasikirwa kunetseka nekusarongeka. Muchokwadi, kukuvadzwa kwezvinhu kunogara uye kwakakodzera kubhadharwa
Iyi nheyo inoreva kuti uyo akakuvara mubato wechiitiko chinokuvadza haazodzoserwe kune zvinopfuura kukuvara kwake kwakazara. Chinyorwa 6: zana yeDutch Civil Code inotaura kuti kana chiitiko chimwe chete ichi chisiri kungokonzeresa akakuvadzwa, asiwo zvinopa zvimwe zvinobatsira, rubatso urwu runofanirwa kubhadharwa kana tarisa kuti kukuvara kuchapihwa, kunyangwe izvi zviine musoro. Kubatsirwa kunogona kutsanangurwa sekuvandudzwa kwe (asset) chinzvimbo chewakabatwa nechikonzero chechiitiko chinokuvadza.
Uyezve, kukuvara hakuzogara kuchingobhadharwa zvakakwana. Culpable hunhu hweiye akabatwa iye kana mamiriro munzvimbo yengozi yeiye akabatwa anoita basa rakakosha mune izvi. Mubvunzo uyo unofanirwa kubvunzwa unotevera: waakabirwa angangoita zvakasiyana here nezvaakaita nezvekuitika kana huwandu hwekukuvara? Mune zvimwe zviitiko, munhu akabatwa angamanikidzwa kudzikisira kukuvara. Izvi zvinosanganisira mamiriro ezvinhu ekuve nemagetsi anodzima moto pamberi pechiitiko chinokuvadza, senge moto, chakaitika. Pane chero mhosva pane irwo here rwewakabatwa? Kana zvakadaro, maitiro anokanganisa muchimiro chinotungamira kudzikiswa kwemubvumirano yemubhadharo weiye munhu ari kukonzera kukuvara uye kukuvara kunofanira kukamurwa pakati pemunhu ari kukonzera kukuvadzwa uye munhu anenge akuvadzwa. Mune mamwe mazwi: a (yakakura) chikamu chekukuvara inosara pamubhadharo weiye akabatwa. Kunze kwekunge iye akakuvadzwa akadhinirwa iyo.
Mumamiriro ezvinhu akati, chiitiko chekirasi chinogona kuve chinokwezva imwe nzira kune imwe inogona kuitika maitiro. Izvi zvinonyanya kuve zvakadaro nekuparadzira kukuvara: huwandu hwese hwekukuvadzwa kwakawirwa nevanotadzirwa hwakakura, asi kukuvara kuri kuita munhu anenge arwiswa kwakaderera. Muchiitiko ichocho, iyo muripo inogona kuwanzo kazhinji isingapfuure mutengo wechiitwa, nguva yekudyara uye njodzi yekuti munhu anenge achimhanyisa kumhanyisa. Uye zvakare, avo vane mhosva yekukuvara kwakadaro kazhinji mapato makuru anowanzoziva mutemo wepamutemo uye ane zvakakwana zvemari zvemari zvekumhan'ara.
Kubva musi waNdira 1, 2020, iyo Mass Claims Settlement Act mukubatana kuita zvinhu yakapinda musimba. Izvi zvave kuita kuti mapato akakuvara, ayo kukuvara kwakakonzerwa nechiitiko chimwe chete kana zviitiko zvakafanana uye kune mumwe chete kana vashoma nhamba ye (zviri pamutemo) vanhu vane mhosva, kuisawo kuunganidzwa kwechikumbiro chemubhadharo kuburikidza neboka rinofarira. Ikozvino kune hutongi humwe chete hwezviitiko zvekirasi pasi pechikamu 3: 305a yeDutch Civil Code, zvisinei kuti vanoshanda here kuti vape muripo muhomwe kana kwete.